Unofarirwa NaMwari. Vakakuisa PaNzvimbo Yakakunakira
Mugovera, 25 Ndira 2020
"Erisha akamupindura akati: Ndingakubatsira seiko? Nditaurire, chii chaunacho mumba mako? Iye akati: Murandakadzi wenyu haana kana chinhu kunze kwamafuta mashoma shoma" (2 Madzimambo 4 ndima 2).
Kune vamwe vakadzingwa mabasa. Vamwevo ndivo vane mhindu dzisati dzichaunza mari. Nokudaro, havachina tariro. Zvino, kuda iwe wakazvarwa patsva. Haufaniri kushaiwa tariro. Unogona hako kunge wakadzingwa basa. Izvozvo hazvina basa. Zvekare, hazvina basa kuti wakadzingirwei. Mwari vanogona kuita kuti zvinhu zvikunakire. Izvozvo ndizvo zvakakosha.
Takatarisa nhoroondo yaJosefa. Takaidzidza nezuro. Josefa yakanga iri nhapwa. Akanga ari muranda. Saka akanga asingabhadharwi. Asi akapedzisira afuma. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna Genesi 39 ndima 2. Josefa akanga ari mwana wedzinza raAbrahama. Izvozvo ndizvo zvakanga zvakakosha. Mari haisi iyo yaaifanira kutanga awana. Ane hope dzaakanga arota. Zvekare, akanga achiziva rudzi rwake. Aifarirwa naMwari. Hareruya!
Mwana waMwari haana chingamukonesa kuita zvinhu. Haana chingamukonesa kuwana zvaanoda. Saka iwe wakaiswa panzvimbo yakakunakira. Nokudaro, zita rako richava guru. Izvi ndizvo zvatinovona muna VaRoma 8 ndima 28. Ndima iyi inoti, "Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobatirana kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadanwa sezvaakafunga". Hapana chinhu chinongokaruka chaitika kwauri. Pangava nezvinhu zvawakatarisana nazvo. Zvinhu izvi zvinogona kuita sezvisina kukunakira. Asi ndizvo zvichatokubatsira. Saka kuda ungasava nemari. Iyi ingava mari yekusimudzira mabasa ako. Ungava usina chinhu. Haufaniri kuchema izvozvo. Haufaniri kudemba.
Tine ndima yatavhura nayo. Eriya ndiye aitaura mundima iyi. Akanga ari kutaura kushirikadzi. Akati kwairi, "... chii chaunacho mumba mako?" Mudzimai uyu akanga aine hari. Hari iyi yakanga iri doko. Yakanga iine mafuta. Mafuta aya akanga ari mashoma shoma. Asi yakazomusiya ava nemafuta akawanda. Ndiye akanga ava kutotengesera vamwe mafuta. Mwari ngavarumbidzwe! Kuda ungada mari. Iyi ingava mari yekushandisa kuita mabasa ako. Mari iyi inotova mupfungwa dzako. Kuda ungada zvingakubatsira. Zvinhu izvi zviri muna Kristu. Kristu ava vanotova mukati mako. Zvino, Mweya Mutsvene vari mukati mako. Ndivo vaunofanira kutarisa kwavari. Vimba navo. Varege vakutungamirire. Varege vakupe gwara. Vangakuraira zvekuita. Ita zvinhu izvi. Vanozoisa maropafadzo avo pazviri. Nokudaro, zvinozobudirira. Zvinozodarika zvawanga uchitarisira. Hareruya!
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Shoko renyu rinondinyaradza. Makaropafadza mabasa emavoko angu. Ndava kubudirira pane zvose zvandinoita. Fuma yangu yava kugara ichiwedzera. Ndiri kupafuma. Ndiri kukura semuti mukuru. Ndinonyengeterera vana venyu pasi rose. Vangava vari kukanganiswa nenzira dzakasiyana siyana. Mweya venyu ngavavabatsire kukurira zvinovakanganisa izvi. Muzita raJesu. Ameni.
Zvirevo 8 ndima 10 kusvika 12
Jobo 22 ndima 29
Romans 8 ndima 28
Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)